समाचार – Classic Khabar
हिमानीले केहि समयको लागि नेपाल छोडेकी छन् । अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले हिमानी शाहलाई अमेरिकामा स्वागत गरेका गरेका छन् । उनी मंगलबार अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रमा रहेको डालस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेकी हुन् । हिमानी ट्रस्ट युएसएको कार्यक्रमका लागि अमेरिका गएको आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन् । विमानस्थलमा ट्रस्टका पदाधिकारीहरूले उनलाई पुष्प गुच्छा तथा खादाले स्वागत गरेका थिए । विमानस्थल पुग्नेहरूमा ट्रस्टका अध्यक्ष हरि शर्मा, महासचिव आनन्दु लामा, सामाजिक अभियन्ता अनिल पाण्डे , अरुण रुपाखेती, ट्रस्टका केन्द्रीय सदस्य मोहन निरौला,चर्चित समाचार वाचिका रमा सिंहलगायत थिए । हिमानीले पछिल्लो दशक हिमानी ट्रष्टमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी छन् । समाजसेवामा सक्रिय रहेकी उनी ट्रष्टको शाखा उद्घाटन गर्न अमेरिका आइपुगेकी हुन् ।
कोभिड महामारीमा किन अमेरिका पुगीन् हिमानी शाह ?
पूर्व यवराज्ञी हिमानी शाह अमेरिका पुगेकी छन् । उनी हिमानी ट्रष्टकी अध्यक्ष एवं पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह ट्रष्टकै कामले अमेरिका पुगेकी हुन् ।अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा बिहीवार हिमानी ट्रष्टको शाखा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । झण्डै एक दशकदेखि हिमानीले ट्रष्टमार्फत सामाजिक कार्यमा सक्रिय छिन् । कोधिड संक्रमण शुरू भएपछि भने ट्रष्टको काम प्रभावित भएको छ ।अमेरिकामा ट्रष्टको शाखा उद्घाटन गरेर सहयोग जुटाउने योजना रहेको सहयोगीहरूले बताएका छन् । यो पनि, काठमाडौलाई केन्द्रविन्दु बनाएको कोभिड संक्रमणले सरकारी कर्मचारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई संक्रमित बनाएको छ । राजनीतिक दलका नेता देखि कर्मचारी सम्म अधिकांश संक्रमित छन् । कर्मचारीलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले अत्यावश्यकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा स्थगित गरेको जनाएको छ । बुधवार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले सेवा स्थगित
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका-६ का डम्बर अवस्थी ह’ ‘त्या प्र’करण’मा थप एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यसअघि स्थानीय २३ वर्षका शिक्षक हरिस अवस्थी प’क्राउ परेकोमा अहिले उनकै आफन्त पर्ने २८ वर्षका नवराज अवस्थीसमेत पक्राउ परेकाछन् । उनले घटनामा आफ्नो सं’लग्न’ता रहेको स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यता विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भने आफ्ना कार्यकर्ताको ह’ ‘त्या पछि दैनिक आन्दोलन गरिरहेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सदस्यसमेत रहेका ३० वर्षीय डम्बर अवस्थीको शव गत बुधबार स्थानीय जंगलमा ओ’ढारभित्र गा’डेको अवस्थामा भेटिएको थियो । यस्तो छ घटना - २३ पुसमा सुर्नया-६ का स्थानीय शिक्षक हरिस अवस्थीले आफ्नो फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेखे । गाउँमा ह’राए’का व्यक्तिको नाम किटान गर्दै उनले फलानोलाई फलानोले मा’रे’को होसम्म लेखे । स्थानीय दुई जनाले विप्लवका ६ कार्यकर्ता लगाएर आफूलाई समेत मा’र्न खो’ज्दैछन
ठगी आरोपमा गत मंसिर २७ गते पक्राउ परेर साढे १३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा २९ दिनको हिरासतवासबाट महिला न्यायाधीश गीता श्रेष्ठको आदेशबमोजिम छुटेकी भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्यूजकी पूर्व नेपाल संवाददाता एन्जिना कार्कीले लगाएको यौ’ ‘न दु’र्ब्य’व’हा’रको आरोपबारे ठगिएका सहकारी ब्यवसायी ज्ञानेन्द्र शर्माले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् छर्लङ्ग पारेका छन् । शर्माको उजुरीका आधारमा बसन्तपुरको होटलबाट जनसेवा प्रहरीद्वारा रं’गेहा’त पक्राउ परेर छुटेकी कार्कीले गत बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूलाई हिरासतमा रहँदा यौ’ ‘न दु”र्व्यवहा’र भएको ऋषि धमलाको भृकुटीमण्डपस्थित रिपोर्टर्स क्लबाट आरोप लगाएकी थिइन् । ‘पत्रकार’ कार्कीले आफूलाई शर्माले फ’सा’एको बताउँदै प्रहरीले पनि हिरासतभित्र भन्नै नमिल्ने खालको द’बाब दिएकोसमेत आरोप लगाएकी थिइन् । आफूलाई शर्माले फ’सा’उन खोजेको प्रमाण भएको बताए पनि कार्कीले त्यसबारे कुनै सबु
Jan182022 by Classic KhabarNo Comments
यी हुन् २२ वर्षिय सुस्मिता कपाली अब कहिले नफर्कने गरि सधैको लागि बिदेशी भुमिमा अस्ताईन
अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया पुगेकी एक नेपाली चेलीको मृत्यु भएको खबर आएको छ । सिड्नीमा बस्दै आएकी एक नेपाली युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी हुन् । जानकारी अनुसार सिड्नीस्थित अर्चामनमा बसोबास गर्दै आएकी २२ वर्षिय सुस्मिता कपालीको मृत शरीर फेला परेको छ । काठमाडौं, कीर्तिपुर घर भएकी कपाली अध्ययनका लागि २ वर्षअघि अष्ट्रेलिया पुगेकी थिइन् । हाल एमपीएल पढिरहेकी उनको घटनाबारे त्यहाँको न्यु साउथ वेल्स प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी गराएको छ । सुष्मिता मृत्युको घटनाले त्यहाँका सबै नेपालीहरूलाई निकै दुःखीत बनाएको छ । मिजासिली स्वाभावकी सुष्मिताको असामहिक निधनले सबैजना स्तब्ध भएका छन् । मृतकको मृत शरीर नेपाल पठाउन न्युसाउथ वेल्समा गैर आवासीय नेपाली संघले गो–फण्डमि मार्फत सहयोग संकलन सुरू गरेको छ । अभियानबाट १० हजार डलर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १३ हजार ६ सय ५९ डलर संकलन भइसकेको छ
Jan182022 by News DeskNo Comments
सुर्खेतमा एकै परीवारका चार जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार कोइला बालेर कोठाभित्र सुतेका आमासहित तीन जना बालकको मृत्यु भएको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० स्थिति बुदबुदीमा ३५ वर्षीया कल्पा बुढा (बिसी), ९ वर्षीय छोरा निरज बुढा, ८ वर्षीय छोरा चिरञ्जीवी बुढा र ५ वर्षीय सोमराज बुढाको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार उनीहरु शुक्रबार राति साढे नौ बजेतिर कोइला बालेर कोठामा सुतेका थिए । ‘ हामीले शनिबार राति साढे सात बजेतिरमात्रै घटना बारे जानकारी पाएका थियौं,’उनले भने,‘ त्यसपछि प्रहरी घटनास्थलमा गएर अनुसन्धान गरेको थियो । घरका कल्पनाका ससुरा वीरबहादुर बुढा पनि थिए । तर उनी शनिबार विहानै वृद्धातिर गएको र बेलुका छ बजेतिर फर्केर आउँदा बुहारी र नातिहरुलाई नदेखेपछि खोजी गरेको थिए,’ वीरबहादुर बुढाको भनाई उदृत गर्दै डीएसपी घर्तीले रातोपाटीसँग भने,‘ वीरबहादुर त्यसपछि बुहारी र न
यिनै कांग्रेसका नेता कोइराला जसले १० बर्षीया बालिकालाई बाथरुममै यस्तो गरे !
बालिकालाई क’र णी ग’रे’को आरोपमा नेपाली कांग्रेसका नेता पक्राउ परेका छन्। नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ समितिका सदस्य रहेका मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–२ का ५० वर्षीय शिव कोइरालालाई प्रहरीले १० वर्षीया बालिकालाई क’र णी ग’रेको आरोपमा आइतबार पक्राउ गरेको हो। बुढीगंगा गाउँपालिका–२ स्थित टंकिसनवारी घर भएका कोइरालालाई बालिकालाई ज’वरज’स्ती क’र णी ग’रेको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव उपरिक्षक मञ्जिल मुकारुङले जानकारी दिए। उनले पीडीतको जाहेरीका आधारमा कोइरालालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाइएको बताए। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका कोइरालालाई सोमबार जिल्ला अदालत मोरङमा म्याद थपको तयारी गरिएको छ। शिव कोइरालाले १० वर्षीय बालिकालाई टंकिसनवारीस्थित बाथरुममा शुक्रबार ज’वर’जस्ती क र णी गरेको आरोप छ। कोइराला केही साता अघि विराटनगरमा सम्पन्न अधिवेशनबाट प्रदेश समिति सदस्
खोप लगाएपछि हल्का रुघाखोकी लागेको थियो । बिसन्चो महशुस भएपछि ३५ वर्षीया कल्पना बुढाले शुक्रबार साँझ खाना पनि खाइनन् । रात परेपछि उनी आफ्ना दुई छोरा र एक भदैसहित सुत्ने कोठाभित्र पसिन् । जाडो महशुस गरेकी उनले कोठामा तातो होस् भनेर झ्यालढोका नै बन्द गरिन् । अनि तसलामा कोइला बालेर सुतिन् । तर शुक्रबार राती एउटै कोठामा सुतेका चारैजना फेरि ब्यूँझि नै पाएनन् । वीरेन्द्रनगर–१० बुदबुदीमा रहेको आफ्नै घरमा सुतेका कल्पना, उनका छोराहरु निरज र चिरिञ्जीवी तथा भदा सोमराज शनिबार बेलुकी मृत भेटिए । घरमा कल्पनाका ससुरा वीरबहादुर विसी पनि थिए । तर उनी शनिबार बिहानै घरबाट आफ्नो काममा निस्किए । बेलुकी घर आउँदा वीरबहादुरले आफ्ना नातीहरुलाई देखेनन् । घर पनि सुनसान देखे । नातीहरु नदेखेपछि उनी हतारिँदै बुहारी कल्पना सुत्ने कोठातर्फ गए । तर कोठाको ढोका नै खुलेन । झ्याल पनि बन्द भएपछि उनले आत्तिदै छिमेकीहरु ब
परिवारको सपना पूरा गर्न कुवेत गएकी माया कहिले नफर्किने गरेर सधैको लागि उतै अस्ताईन
रोजगारीका लागि कुवेत पुगेकी एक नेपाली महिला कामदारको मृ,त्यु भएको । कुवेतको मङ्गाफमा गत शुक्रबार क्रेनको ठ,क्क’रबाट सिन्धुपाल्चोक स्थायी भएकी माया तामाङको निधन भएको हो । बाटो काट्ने क्रममा विपरीत दिशाबाट आएको क्रेनले ठ’क्क’र दिँ’दा उनको घटनास्थलमै मृ,त्यु भएको थियो । उक्त घटनाबारे कुवेत प्रहरीले मुचुल्का बनाई क्रेन चालकलाई पनि नियन्त्रणमा लिइसकिएको बताइएको छ । मृतकको शवलाई पो’स्टमा’र्टमका लागि हस्पिटल लगिएको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार मृतक तामाङले बाटो काट्ने क्रममा मोबाइल चलाउँदै बाटो काटिरहेकी थिइन् । सोही बेला उक्त दु,र्घटना भएको बताइएको छ । यस घटनाको विषयमा कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासमा जानकारी गराइसकेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) कुवेतका युवा संयोजक नवराज पराजुली जानकारी दिए । यता दूतावासले पनि घटनाबारे जानकारी आएको भन्दै कम्पनी तथा परिवारसँग समन्वय गरेर आवश्यक कानुनी प्रक
गगनचुम्बी हिमशिखरको काखमा अवस्थित ऋषिमहर्षिको तपोभुमि, पवित्र तीर्थताल मनमोहक प्राकृतिक भूमि नेपाल र नेपाली समाजमा हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म स्वस्थानीको व्रत र पूजा गर्नेपरम्परा रही आएको छ । हरेक वर्षजस्तै यसवर्ष पनि ३ माघदेखि एक महिनासम्म मनाइने स्वस्थानी व्रत अनुष्ठान प्रारम्भ भएकाे छ । पहिलोपटक व्रत प्रारम्भ गर्न चाहनेका लागि बृहस्पति तथा शुक्र अस्थ नभएकाले विशेषगरी लामो समयको अन्तरालपछि सोमबार युक्त पुनर्वसु नक्षत्रको शुभ मुहुर्तको संयोग जुरेकाले वर्तमान समयमा देखापरेका विभिन्न समस्या विस्तारै नियन्त्रण हुँदै जानेछ र विश्वले नै नयाँ परिवर्तन पाउने मुहुर्त परेको छ । लामो समयदेखि सन्तान नहुनेले विधिपूर्वक यसवर्ष स्वस्थानीको व्रत बसेर समापन गरेमा सन्तान प्राप्तिको योग समेत बन्ने मुहुर्त छ । देवी स्वस्थानीको विधिपूर्वक व्रत एवं पूजा-आराधना गर्नाले मनोक